दुविधाको स्थितिबाट बाहिर निस्कन सहयोग गर्ने साधारण टिप्स - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips दुविधाको स्थितिबाट बाहिर निस्कन सहयोग गर्ने साधारण टिप्स
दुविधाको स्थितिबाट बाहिर निस्कन सहयोग गर्ने साधारण टिप्स
दुविधा भरिएको दिमागले हामी आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित हुन सक्दैनौं । दुविधा बढ्दै गएमा त्यसले अनावश्यक तनाव बढाउंदै मानसिक रोग समेत निम्त्याउन सक्छ ।
सबैभन्दा पहिले त आफ्नो जीवनका प्राथमिकताहरु छुट्टाउनुहोस् । जब तपाईं आफ्ना प्राथमिकताहरु बारे स्पष्ट हुनुहुन्छ, तब तपाईंलाई निर्णय लिन सहज हुन्छ । तपाईं आफूले चाहेको कुरामा दृढ बन्नुहुन्छ ।
दुविधामा भएको समयमा आफूसंग भएका विकल्प, या कुन-कुन कुरालाई लिएर दुविधामा हुनुहुन्छ, ती कुराहरुलाई डायरीमा टिपोट गर्नुहोस् । अब ती कुराबाट हुने फाइदा बेफाइदा, चुनौती र भविष्यका सम्भावनालाई लेख्नुहोस् । त्यसपछि कुन तपाईंको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मूल्यांकन गर्नुहोस् ।
भावनामा बगेर, दुविधा लिएर नबस्नुहोस् । दिमागले पनि सोंच्नुहोस् । दिर्घकालिन कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस् ।
आफ्नो अभिभावक या साथीसंग कुरा गर्नुहोस् । आफूसंग भएका विकल्प बताउनुहोस् । त्यसको लागि सिधै भन्न सक्नुहुन्न भने, उदाहरण जस्तो बनाएर, अरुको समस्या जस्तो बनाएर पनि बताउन सक्नुहुन्छ । त्यसपछि उनीहरुको धारणा बुझ्नुहोस् । यसले गर्ना निर्णय लिन ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
काम, करियर आदिलाई लिएर दुविधामा हुनुहुन्छ भने आफूसंग भएका विकल्पहरुको बारेमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी लिनुहोस् । यसको लागि पुस्तक, सेमिनार, इन्टरनेट या त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्ति तपाईंको लागि सहयोगी बन्न सक्छन् ।
धेरैजसो समय हामी अरुको खुशी र आफ्नो खुशीका बीचमा दुविधामा पर्छौं । आफूलाई, आफ्नो खुशी र आफ्नो रुचीलाई पनि महत्व दिनुहोस् । अरुले के भन्लान् भन्ने कुरालाई कम महत्व दिनुहोस् । ख्याल राख्नुहोस् कि, तपाईंले लिने निर्णयले तपाईंको जीवनमा दिर्घकालिन असर पर्नेछैन ।
लेख बारे आफ्नो विचार यहाँ लेख्नुहोस :
Previousपाब्लो पिकासोका प्रसिद्ध भनाइहरु
Nextएमएस धोनीका प्रेरक भनाइहरु
सम्बन्धित लेखMORE FROM AUTHOR
काममा मन लागिरहेको छैन भने अपनाउनुहोस् यी तरिका
चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ ? ७ टिप्स
दिमाग शान्त र सकारात्मक राख्नको लागि नगर्नुहोस् यी ८ काम
अगाडी गएर बोल्दा लाग्ने डरलाई कसरी कम गर्ने ? साधारण तर प्रभावकारी ४ टिप्स
सफल जीवनका लागि सधगुरुका ७ सुझाव
जिन्दगी तिम्रो डेरा होइन, तिम्रो घर हो
के तपाईं सफलताको लागि योग्य हुनुहुन्छ ? जाँच्नुहोस् आफूलाई
मानिसहरुसंगको सम्बन्ध अर्थात् आफ्नो नेटवर्क कसरी बढाउने ?
सफल जीवनको लागि आफैसंग गर्नुहोस् यी १० प्रतिबद्धता
अनुसन्धान भन्छ : गुनासो गर्ने, खोट लाउने बानी मानसिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक April 3, 2020
यो समय बितेर जानेछ March 27, 2020
अनुसन्धान भन्छ : नियमित किताब पढ्ने व्यक्तिको आयू लामो हुन्छ February 9, 2020
४० वर्षको उमेरमा हाइस्कुल भर्ना, ६४ वर्षको उमेरमा इञ्जिनियरिङ्ग डिप्लोमा पास February 8, 2020
बाराक ओबामाका प्रसिद्ध भनाइहरु
अनुसन्धान भन्छ : गुनासो गर्ने, खोट लाउने बानी मानसिक स्वास्थ्यका लागि...
यो समय बितेर जानेछ